Xayawaankee ayaa kuu habboon
Ma waxaad u maleyneysaa xayawaanka nooca loo yaqaan 'vet'? Waxaa xiiso leh in dadku loo qeybin karo noocyo badan iyadoo ku xiran sida ay u dhaqmaan xayawaanka. Sidee iyo sababta aan si xushmad leh u dooran karno xayawaankeena iyo sababta ay u egyihiin ehelada iyo xayawaanka rabaayada ah?
Ma ahan funny, eeyga ama bisad, calaacal ama iana, dabcan, ma muuqdaan muuqaalkooda inta lagu jiro nolosha. Waxaa soo baxday in aan si sahlan u dooranayo bahalka curadka ah ee noo habboon.
Ka dib markii aan si quruxsan u eegno muraayadda muraayadda, inkasta oo kor loogu dhawaaqo, ma aqoonsan karno quruxda dhagaha dheer iyo gooyo cidhiidhi ah oo indhaha ah. Waxaanu soo iibsanaa lacag, mana ka doodi mawduucan. Sidaa daraadeed waxa soo baxaya in kuwani aysan ahayn xayawaan noo eg, laakiin waxaan ku jirnaa iyaga. Sidoo kale muhiimad wayn ayaa ah dareenka aqalka. Xayawaanku waxay dareemi karaan xaaladeena oo nagala murugoodaan ama, si tartiib ah, ha naga farxin. Marka lagu daro dareenka macquulka ah, dabeecada xayawaanka iyo dabeecadeenu waa muhiim. Dhamaan arrimahan waxay ku dhacaan heerar aan nasiib laheyn, markaad naga dhexayso codka ayaa sheegaya in tani ay tahay xayawaan la mid ah oo aan la socono. Marka loo eego mabda'aas, dadku waxay u qaybsan yihiin dhawr qaybood:
1. Sawir - dhammaan
Khabiirada cilminafsiyeedka ayaa ugu yeeraya dadka sida shakhsi ahaaneed. Marka ay helayaan xayawaan, ugu horreyntii waxay u fiirsadeen muuqaalkiisa. Xayawaanku maaha inuu ahaado mid wanaagsan oo noociisa ah, ama, tusaale ahaan, aan qabin wareegga wareegga, laakiin waa inay noqotaa mid hagaagsan. Dadka noocaan ah waxay u arkaan xayawaanku inay tahay mid waxtar leh halkii saaxiib ah. Isla markiiba ku bixi tusaala: calaamad aad u qurux badan oo qurux badan, kalluun aan caadi aheyn, kalluun shinni ah; iyo haddii ay tahay ey ama bisad, markaa waa inay noqdaan qaar ka mid ah noocyada super-naadiga ah. Sidoo kale muhiimad yar maaha sida tan ama xayawaanku yahay. Kaliya xusuusnow sida dhowr sano ka hor duufaantii xiddigaha ahaa eyda yar-yar ee gacanta lagu hayo ee ku haboon cagtooda. Ka dib markii dhowr qof oo caan ah ay la socdeen iyaga oo raacaya waddooyinka roogga, haweenku waxay bilaabeen inay iibsadaan chihuahua, gawaarida Yorkshire, spitz, griffins, ciyaaraha caruusada iyo bolonok Maltese. Xayawaanka noocan oo kale ah waa sheyga milkiilaha, oo ku saabsan qofka uu marar badan ku soo celiyo marka martida yimaadaan. Nasiib wanaag, martida guryahaas waa inta badan. Xayawaanka, habka, waa in ay daruuri ahaadaan hagaag, sababtoo ah milkiilayaashooda waxaa lagu kala saaraa xaalad dhaqaale oo adag. Halkan waa muuqaal kale oo isku mid ah.
2. Eeddo nin saaxiibkiis
Marka qofku rabo inuu la hadlo qof aan siinaynin talooyin aan loo baahnayn, xanta ama cambaareyn, wuxuu la xariira xayawaanka. Qofku wuxuu u baahan yahay isgaadhsiin iyo oggolaansho. Waxay noqon doontaa mid aad muhiim ugu ah isaga inuu arko xayawaanka isaga la kulma fiid kasta oo uu maqlo farxadkiisa, qadhqadhaya, qosolka ama barking. Iyada oo aragtidan ku wajahan walaalahaa yaryar, qofku wuxuu bilaabaa inuu barto caadooyinka, aragtida, dhaqdhaqaaqyada, iyo si aan qarsoodi lahayn u daabacan. Qofka sida guriga ah waxaa jiri kara ey eey ka dhasheen, iyo bisad guri, iyo boodhkii oo ku duulay caleenta daaqadda. Isbarbardhiga u dhexeeya iyaga ayaa lagu muujiyay dabeecadda.
3. Qalab aan caadi ahayn
Nooca gaarka ah waa kuwa dadka guriga ku nool ay ku noolaan karaan toobad ama baranbaro, rahyo, abeesooyin ama gooryaanyo leh caarooyin. Uma baahnin caress, fiiro gaar ah. Waa indheerayaal ku sugan nolosha. Xaaladdan oo keliya, dadka ayaa loo sheegaa dadka inay aamusnaanta horey uga hadlaan. Waxay si fiican u iftiiminayaan isgaadhsiinta waxayna geli karaan bilooyin. Xayawaankoodu ma aha kuwo aan qabin, sababtoo ah waxay ku qaataan ugu yaraan waqtiga iyaga quudinta: waxay quudiyaan quudinta, xayawaankuna wuxuu naftiisa quudiyaa, marar dhif ah iyo marka ay rabto.
4. Dadka firfircoon
Dadka noocan oo kale ah waxay bilaabaan xayawaan ujeeddo cayiman. Waxay u baahan yihiin inay daryeelaan qof. Waxay ka buuxsamaan nolosha, tamarta, inay diyaar u yihiin inay ku socdaan maalmo iyo habeenba habeenkii, tareenka, xoqida, maydhashada, ciyaarta ... Hadday eey leeyihiin, markaa way ka jilcaan barta nacaybka, iyo bisaduna waa cayaaraan. Buundooyinka ay ku tababaraan hadalka, iyo jiirarka waxaa la baraa in ay ku wareegaan muraayadda.
5. Dhaawaca iyo wajiyada
Haddii aad rabto in guskaagu uu yeesho qaabab u eg wejigaaga, markaa waa inaad go'aamisaa nooca muuqaalka iyo taranka. Xaqiiji in marka xayawaanku uu u egyahay sida sayniska, marwalba wuxuu keenaa dareen dheeraad ah oo dhoola jiidaya waddooyinka. Miyuu aad u wanaagsan yahay in la helo mawjad wacan markaad u dhowdahay xayawaankaaga?
Haddii aad haysato qaab muuqaal ah oo muuqaal ah iyo mid sawir leh, ka dibna fiiro gaar ah leh bulldogs, tusaale ahaan American ama Ingiriisi. Waxay abuurayaan aragtida xoogga, tamarta iyo go'aaminta. Isla markiiba, way jecelyihiin oo isku dheelitiraan, way adagtahay inay waalan Iyagu waa kuwo cabsan oo adag, oo sidoo kale edeb leh. Sawirku waa ka culus yahay. Tusaale ahaan, terraasto Boston ah, oo horay loo yaqaan 'bull terrier', waa ey ey yar yar oo la guuray oo leh xajmiga wareegsan iyo dhegaha la yaabay.
Dadka haysta wejiga dheer, wejiga dheeraadka ah waxay ku raaxeysan karaan basset basset iyo dhiigga. Waxay u muuqdaan wax muuqaal ah oo muuqaal ah, laakiin naxariis leh. By habka, haddii aad taabto iyo dhirbaaxo - eeyaha of this tani waxay xaqiiqdii kugu habboon tahay. Waxay leeyihiin sifooyin isku mid ah. Weimaraner khayaali ah iyo Doberman ayaa sidoo kale leh xashiish dheer.
Haddii aad kibirsan tahay timo dheer iyo mid toosan oo aad rabto in aad haysato ey dheer oo leh muuqaal sharaf leh iyo muuqaal fayoqab leh, fiiri noocyada diyaarka ah, dharka tooska ah ee lagu qaato, haraar Afgaani ah.
Miyaad leedahay timo jilicsan? Fiiri Ruushka eeyga ah ee reer Ruushka. Timaheedu waa mawjad qurux badan, iyo qalab - difaac aamin leh iyo milkiilayaasha timaha cagaarka leh. Waxa la yiraahdo poodles cute, timahoodu waxay u eg yihiin fasax. Sidoo kale waa inaad fiiro gaar ah u qaadataa bahda isboortiga.
Kuwa heysta dharka quruxda badan ee qaabka kubbadda waxay ku soo jiidan karaan sharaf, sharoobo, chow-chow. Gubashadooda wareegsan waxay ku wareegsan yihiin dhogor aad u badan oo eeyadu u egyihiin sida kubadaha, jilicsan iyo qalafsan.
Haddii aad leedahay timo gaaban, markaa waxaad jeclaan laheyd wadada aaladaha Australiya, yagie Terrier, dharkiisu waa gaaban yahay lana miiray; oo leh timo aad u gaaban ama madaxa la jaray - chihuahua, eyga Fircoon.
Dadka qaangaar yar ayaa soo wajihi doona eeyaha yaryar sida hin Japanese ah, jardiinada galbeedka jilicsan ee jilicsan, zwerkschnauzer, whippet.
Doorashada bisad, waxaanu inta badan ku tiirsanaa midabka iyo dhererka jaakadda. Xaqiiqdu waxay tahay in noocyada badankoodu ay leeyihiin midabyo kala duwan iyo dherer kala duwan oo dhogor ah, sidaa daraadeed way adagtahay in lagula taliyo ilmo gaar ah, sababtoo ah dhammaan nuucyadeeda lama xisaabin karo. Sidaa daraadeed, waxaa wanaagsan inaad la xiriirto taageerayaasha qalaad: waxaad jecleysataa bisad bengal ah oo u egtahay leopard oo midabkeeda leh, bisad jilicsan oo leh xargaha dheeraadka ah, dhegaha waaweyn iyo jilicsanaanta mugdiga oo dhan ee jirka oo dhan, sphinxes balsa, Kurilian bobtail aan lahayn dabo ama, tusaale ahaan, goglaan curlsada cufan.
Soo noqoshada fiidkii shaqada, beerta dhexdeeda, waxaan ku dhex orday labo qof: nin ka yaryahay da 'weyn oo iga weyn ayaa igu socda, isaga oo gacmihiisa ku xirnaa, isaga oo ku tilmaamaya naqshadiisu yar tahay. Suufkii eeyga ahaa wuxuu ahaa mid la mid ah sida timaha nin. Milkiilaha leh xayawaanku wuxuu ku socday, wax yar oo qashin ah, lugta midig iyo paw. Sababta qaarkood ma aysan kicin kalsoonideyda, iyo, sida muuqata, ma aha fursad. Anigu waa inaan u hogaamiyaa iyaga, eeygu wax yar baa iigu baddalay, oo marti-geliyayaashuna waxay ku dhuunteen isla cadowgu, sida ay ii muuqato, barking. Waxaad aragtaa, ma jiraan meelo ku filan. Naftaydaan, waxaan ogaaday in eeyga iyo ninka labaduba ay aad u egyihiin, labadaba caadooyinkooda, iyo dibedda. Waa wax xiiso leh, laakiin cida ka mid ah xubnaha qoyska ayaa mugtayda Gavryusha u eg sida ay u egtahay iyo cidda uu leeyahay dabeecad xun? Su'aashu waxay tahay, dabcan, waa adag tahay ...
Noocyada bisadaha: Maskaxda St.
Xoogaa weyn: sida loo lumiyo bisad miisaanka?
Sidee loo korin karaa ilmo da 'yar oo reer Ruush ah?
Waxa ugu xiisaha badan oo aan caadi ahayn oo ku saabsan xakamaynta gudaha
Taariikhda dhalashada Belgian Shepherd Dog
Eeyga wuxuu eey ku dhashay American Staffordshire Terrier
Ogolaanshaha carruurta leh xayawaanka duurjoogta ah iyo guryaha
Nasiib wanaag iyo raaxo raaxo leh
Patties leh hilibka lo'da
Qamadida leh cufnaanta
Horumarka maskaxeed ee carruurta ka yar hal sano
Aqoon aasaasi ah oo ku saabsan maskaxda ragga
Bacriminta foornada mikrowerka
Qalabka waxtarka leh iyo codsiga kelyaha boogaha ee daawada
Macaroni ee Badda
Taariikhda uurka: 25 asbuuc
Waxaan ciyaarnaa kulamo kala duwan kubada
Guurka marka uu jiro nin weyn
Cagaha cabsida waxay dhaawacayaan lugahaaga
Mabaadi'da uu qofku u doorto cunsuriyeha?
Maraq Cream ah oo ka soo baxa xaanshida khudradda
Sidee loo caawiyaa qofka aad jeceshahay inuu booskiisa ku helo?
Caadooyinkaagu waxay kuu sheegi doonaan waxaad sariirta ku jirto
Sidee lumisaa miisaanka si sax ah